Video Kan sameeyey Movie for Windows 8
> Resource > Video > Video Kan sameeyey Movie for Windows 8: Si fudud Samee Video Movie
Maalmahan dadka aad u badan sida qaadista sawirrada hab gaar ah iyo in la abuuro il-qabad video filimada si aad u hesho iradka nolosha oo dhan. Iyada oo aan caadi ahayn kii sameeyey filim video daaqado 8- DVD Muqaal dhise , waxaad si fudud oo dhaqso uga dhigi karaa video kuu gaar ah movie. Muuqaaladan gaarka ah ee this video movie G daaqadaha ka mid user-friendly interface, doorasho ku darto noocyo fara badan oo sawiro ah iyo hanaan, iyo fursado badan wax soo saarka iwm Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo filim video ah oo la isticmaalayo DVD Muqaal dhise .
1 Ku rakib software movie video files iyo dejinta
Download iyo rakibi DVD Muqaal dhise , ku "Abaabulaan" tab, jiitaa sii jeedi photos digital in storyboard ah (waxa kale oo aad ku dari kartaa videos ka computer ama camera sida aad rabto).
Ka dibna ku dar music soo jeeda ee "shakhsiyeeyo" tab. Waxaad riix kartaa "Music" button ku darto ama kaliya jiidi music ah si ay ula socdaan asalka. Waxaad ku dari kartaa dhawaaq ama diiwaankaaga gaar ah adigoo gujinaya "Voice ka badan".
2 shakhsiyeeyo movie video ah
Tani gaare movie video siinayaa 480+ Hababka filim Hollywood-sida inuu ka soo leexdo sawiro aad u cajiib ah filimada video sida sixir. In "shakhsiyeeyo" tab, kaliya dooran Hababka aad jeceshahay iyo waxa ka codsan in aad video movie. Baadh Hababka filim ka badan.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa qaar ka mid ah xubno la jeclaysto si aad filim video dheeraad ah oo qosol badan iyo firfircooni leh in tab this. Tusaale ahaan, waxaad shakhsiyeeyo karaa qoraalka caption la saamaynta text kala duwan ama ku darto Intro ama Credit si aad video sida ay mawduuca. Aad dooratay oo dhan!
3 Save the video kuu gaar ah filim ama wadaagaan online
Hadda ka dhacay "Abuur", oo ku eegaan aad video movie. Markaas dooran hab lagu soo saarka. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fursadaha aad u:
Guba si DVD: guji oo markiiba gubi in DVD ilaalinta.
Save sida faylasha deegaanka: dooran "Save si Computer" ama "Save sida HD" si ay tayo sare ah ee files asalka ah.
Save oo ku haboon qalab mobile, guji "Save si Mobile Device" ama "Save si Device Apple", oo doorato qaabka wax soo saarka ah.
Naadiya on YouTube: guji "Share in YouTube", ka dibna ku qor macluumaadkaaga account YouTube si ay u daabacaan.
Ok, in la sameeyo. Waxaad arki, iyadoo tani video movie G daaqadaha 8 , samaynta filim video ah waa mid aad u fudud. Just download iyo aad u bilowdo!